Myanmar real estate | Myanmar housing | Property for Sale
Home » Property » Property for Sale (Page 2)
Property for Sale RSS Feed
Listings for Property for Sale (88)
Property, Property for Sale | admin | October 26, 2014
ပြင်ဦးလွင်အနီးစခန်းရပ်ကွက်အမှတ် ၁၅ အတွင်းရှိရှေ့မျက်နှာစာ ၁၃၅ ပေ၊ရှေ့နောက် ၁၇၅ ပေ၊နောက် ၈၀ ပေ၊ပုံစံ ၁၀၅ ကျပြီး၊ခြံစည်းရိုးချိန်းလိပ်ဖြင့်ခတ်ပြီးခြံရှေ့ရှိရေနုပ်...
Property, Property for Sale | Aung Kyaw Moe | October 25, 2014
ပေ ၅၀ ×ပေ ၁၀၅ 3B ကျပြီး ပိုင် ဆိုင် မှု ခိုင် မာ။ အုတ်တံတိုင်း ခတ်ပြီး။နေရာကောင်း
Property, Property Agents, Property for Sale | adpr18th5658 | October 18, 2014
Renuka Real Estate Agency. brings you the best buy & sell options in residential & commercial properties available in Mahrashtra row houses, town hous...
Property, Property for Sale | chintelnewprojects | October 11, 2014
Chintel new projects – Sector 108, Gurgaon(Call – 9911312936) After the grand success of Paradiso, kocoon and serenity, Chintel is coming up with new residen...
သင့်​တင့်​​သော​ဈေးဖြင့်​ပိုင်​ရှင်​ကိုယ်​တိုင်​ အမြန်​ ညှိနှိုင်း ​ရောင်း...
Property, Property for Sale, Wanted | suwai | September 25, 2014
စံပြ​ဈေး၊ ဘဏ်​ မှတ်​တိုင်​ သံသုမာ လမ်းမကြီး အနီး၊ ကားဝင်​ထွက်​လွယ်​​သော ​ရေမမြှုပ်​​သော ကွန်​ကရစ်​ လမ်းကျယ်​​ပေါ်ရှိ ဂရံ​မြေ​ပေါ်တွင်​ စည်​ပင်​၏ ခွင့်​ပြုချက်​...
House For Sale ပင်လုံလမ်းမကြီးကျောကပ် ၄၀x၆၀ ဂရန်မြေ ပေါရှိ ၁ထပ်ခွဲ RC တိုက...
Property, Property for Sale | U Ba Thaung | September 24, 2014
အမျိုးအစား မြေကွက် ၊ ခြံကွက် တိုင်း ၊ ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Sale in Yangon Region မြို့ နယ် ဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်း for Sale in Dagon Myothit (North...
Property, Property for Sale, Wanted | saiaungsoelin | September 13, 2014
No. ၄၂၉ ခ၊ BN ၂ ထပျ၊ (ပေ ၂၀×၆၀) ဂရံ ၊ ကောလိယလမျး (၂၀) ၊ တောငျဥကာပ၊ ၁၃ ရပျကှကျ၊ သိနျး ၁၃၀၀၊ ပိုငျရုငျကိုယျတိုငျရောငျးမညျ။
Property, Property Agents, Property for Sale | Yinmonthet | September 11, 2014
အမှတ်(၈၄၉)၊ ပညာလမ်း၊ (၃၇) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် အရောင်းကိုခုမှစတာဖြစ်သည့်အတွက် လေ၀င်လေထွက်ကောင်းသော ၆လွှာ၊ ၅လွှာ၊ ၄လွှာ ထောင့်ခန်းများ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်...
Property, Property for Sale, Wanted | saiaungsoelin | September 10, 2014
အမှတ် (၁၁၃၉-၁၁၄၀) မာလာနွယ်လမ်းမကြီး တာမွေမြို့နယ် မြေညီထပ် ၁၅ပေ×၅၀ပေ အခန်း(၂)ခန်း, Air con (၃)လုံး, ဆိုဖာ,ေ၇ခဲသေတ္တာ,ေ၇ပူ ရေအေး, မီး, furniture, အ၀တ်လျှော်စက်,...
Property, Property for Sale | saiaungsoelin | September 5, 2014
အမှတ် (၁၁၃၉-၁၁၄၀) မာလာနွယ်လမ်းမကြီး တာမွေမြို့နယ် မြေညီထပ် ၁၅ပေ×၅၀ပေ အခန်း(၂)ခန်း Air con (၃)လုံး ဆိုဖာ ,ေ၇ခဲသေတ္တာေ၇မီး အစုံအလင် ကြွေပြားအပြည့်အစုံ ကားပါကင် သ...
New Lauch – Marina One Residences
Free Business Listing, International Business Listings, Other Stuffs to Sell, Property, Property Agents, Property for Sale, Wanted | Elaine Ng | August 30, 2014
Book Your Appointment For Sales Gallery Viewing : Date : 13th Sept to 12 Oct Time : 11am to 5pm Another talk of the town new launch by M+S Pte Ltd (joint ...
Special Price to Sell Lab Retriever Puppies
Business Directory, Free Business Listing, Other Services, Property for Sale, Services, Wanted | michelmang | August 11, 2014
Ready to go puppies,well vaccinated,8weeks old, Cream Color.. Please take this special price to have the Most Popular dog Breed ,, Just giveacall..094210411...
All times are GMT 6.5. The time now is 12:06 pm.